News | मेसी
News | Tag: मेसी
रोनाल्डो भन्छन्ः मेसी विश्वकै सर्वोत्कृष्ट उत्कृष्ट खेलाडी
एजेन्सी । पूर्व ब्राजिलियन फुटबलर रोनाल्डोले अर्जेन्टिनाका लियोनल मेसी विश्वकै सर्वोत्कृष्ट खेलाडी रहेको बताएका छन् । आफ्नो नजरमा परेका पाँच उत्कृष्ट पाँच खेलाडीको लिँदै रोनाल्डोले मेसी सर्वोत्कृष्ट रहेको बताएका हुन् ।
मेसी र रोनाल्डोले सँगै खेल्न सक्छन्ः ब्राइडा
एजेन्सी । बार्सिलोनाका पूर्व निर्देशक एरिडो ब्राइडाले फुटबल स्टारद्वय लियोनल मेसी र क्रिस्टियानो रोनाल्डोले सँगै खेल खेल्नसक्ने बताएका छन् । उनले मेसीले क्याम्प नाउ छोड्न असम्भव रहेको बताए पनि रोनाल्डोसँग एउटै पचिमा भने देख्न सकिने बताएका छन् ।
छोराहरुसँग घरमै फुटबल खेल्दै मेसी
एजेन्सी । फुटबल स्टार लियोनल मेसी ३२ वर्षका भए । उनै मेसीले युवा खेलाडीहरुलाई फुटबलमा प्रोत्सहित गरिरहेका छन् । उनले आफ्नो क्लब बार्सिलोनामा पनि १७ वर्षीय खेलाडी आन्सु फाटीलाई अगाडि बढाउन मदत् गरिरहेका छन् ।
उत्कृष्ट खेलाडी मेसी कि रोनाल्डो ? यस्तो छ तथ्यांक
एजेन्सी । पछिल्लो १० वर्षको फुटबललाई फर्केर हेर्दा अर्जेन्टिनाका लियोनल मेसी र पोर्चुगलका क्रिस्टियानो रोनाल्डोको छायाँमा धेरै खेलाडीहरु परे । यी खेलाडीहरुले थुप्रै रेकर्डहरु भंग गरे । टिमलाई पनि सफल बनाए ।
सर्वोत्कृष्ट खेलाडी को भनेर प्रश्न गर्दा मेसीले यसो भने
एजेन्सी । अर्जेन्टिनाका स्टार खेलाडी लियोनल मेसीले फुटबलको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी को हो भनेर आफूलाई थाहा नभएको बताएका छन् । सोमबार सर्वाधिक छैटौं पटक फुटबल खेलमा चर्चित अवार्ड बलोन डी’ओर थापेपछि आयोजक फ्रान्स फुटबलसँग कुरा गर्दै उनले आफूलाई साँच्चै सर्वोत्कृष्ट खेलाडी को हो भनेर थाहा नभएको बताएका हुन् ।
बलोन डी’ओर समारोहमा रोनाल्डो किन गएनन् ? यस्तो छ कारण
एजेन्सी । स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाबाट व्यवसायीक फुटबल खेल्दै आएका अर्जेन्टिनाका स्टार खेलाडी लियोनल मेसीले छैटौं पटक बलोन डी’ओर अवार्ड जितेका छन् । सोमबार राति आयोजक ‘फ्रान्स फुटबल’ले उनलाई छैटौं पटक उक्त अवार्ड दिएको हो ।
मेसीको ७ सयौं खेल सुखद्, रोनाल्डोलाई पछि पार्दै बनाए अर्को रेकर्ड
एजेन्सी । स्टार खेलाडी लियोनल मेसीको लागि बार्सिलोनाबाट खेलेको ७ सयौं खेल सुखद् बनेको छ । बुधबार राति सम्पन्न च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत बोरुसिया डर्टमण्डविरुद्धको खेलमा उनले एक गोल तथा दुई एसिस्ट गरे ।
यो पुस्ताको उत्कृष्ट खेलाडी लियोनल मेसीः क्लोप
एजेन्सी । इंग्लिस क्लब लिभरपुलका प्रशिक्षक युर्गेन क्लोपले लियोनल मेसी यो पुस्ताको उत्कृष्ट खेलाडी भएको बताएका छन् । च्याम्पियन्स लिगको खेलअघि कुरा गर्दै क्लोपले मेसी उत्कृष्ट खेलाडी भएको बताएका हुन् ।